I-Biography ka-Irene Parlby
I-Biography ye-Activist u-Irene Parlby
Wazalelwa eNgilani waya kwintsapho ehlala kakuhle, u-Irene Parlby akazange alungiselele ukuba ngubupolitika. Wayefudukela e-Alberta kwaye nomyeni wakhe waba ngumzi. Imizamo yakhe yokunceda ukuphucula ubomi basemaphandleni ase-Alberta amabhinqa nabantwana bamkhokela e-United Farm Women of Alberta, apho waba ngumongameli. Ukususela apho wanyulwa kwiNdibano Yomthetho wase-Alberta waza waba ngowokuqala ngumbhinqa weeKhabhinethi e-Alberta.
U-Irene Parlby wayengomnye we "Famous Five" oomama base-Alberta abalwa kwaye banqoba inxaxheba kwezopolitiko nakwezomthetho kwiNkundla yoLuntu ukuba abafazi baqaphele njengabantu abaphantsi koMthetho we- BNA .
NgoJanuwari 9, 1868, eLondon, eNgilani
NgoJulayi 12, 1965, e-Red Deer, e-Alberta
Umlindi wolungelo lomfazi, i-Alberta MLA, kunye nomphathiswa weKhabhinethi
Iingxaki ze-Irene Parlby
Ngenxa yeyona nkalo yomsebenzi, u-Irene Parlby wasebenza ekuphuculeni amalungelo kunye nenhlalakahle yabasetyhini nabantwana basemaphandleni, kuquka ukuphucula impilo yabo nemfundo.
Amafama aseMerika ase-Alberta
Ukuhamba (iSithili seNyulo)
Umsebenzi we-Irene Parlby
U-Irene Parlby wayengumphathi we-United Farm Women of Alberta ukususela ngo-1916 ukuya ku-1919.
Wayelungu leBhodi labaPhathi be-Yunivesithi yase-Alberta kwaye wancedisa imigaqo-nkqubo ye-faculty yokwandisa, eyanikeza izixhobo zemfundo kwimimandla yasemaphandleni.
U-Irene Parlby wanyulwa kuqala kwiNdibano yoMthetho we-Alberta ngowe-1921.
Ngomnyaka we-1921 u-Irene Parlby wamiselwa nguMphathiswa ngaphandle kwesikhothifoliyo, umfazi wokuqala ukuba abe ngumphathiswa weKhabhinethi e-Alberta. Wayengumfazi wesibini ukuba abe ngumbulungameli wephondo weKhabhinethi eKhanada.
Njengomphathiswa weKhabhinethi, u-Irene Parlby wasungula iiklinikhi zezokwelapha ezihambahambayo kwaye wayengumxhasi wemfundo emide.
U-Irene Parlby wazisa uMthetho oNcinci weNkxaso yabasetyhini ngo-1925.
U-Irene Parlby wayengomnye we "Famous Five" kwiNkundla yabantu eyasungula imeko yabasetyhini njengabantu phantsi koMthetho we- BNA ngo-1929.
Wayengumthunywa weCanada kwi-League of Nations ngo-1930.
U-Irene Parlby wasethatha umhlala-phantsi kwi-Assembly Assembly yase-Alberta ngowe-1935.
Ngomnyaka we-1935 u-Irene Parlby waba ngumfazi wokuqala ukuba anikezelwe udokotela ohloniphekileyo woMthetho waseYunivesithi yase-Alberta.
Iinkcukacha zeNewfoundland neLabrador
Iindlela ezi-4 zokufakela iintlawulo zakho zeNkcazo zeThana laseKhanada
I-Pair Skating Lifts
I-Top 10 ye-Skateboard iPhone Apps
Ukuchonga nokulungisa izihlomelo zezivakalisi
USandra Day O'Connor: iNkundla eNkundla ePhakamileyo
AmaRoma aseMandulo ayethanda ukukhupha
Imbali Yonyaka kunye nosuku kwi-paganism
Funda iFrench Word Vouret
I-Sociolinguistics Inkcazo kunye nemizekelo
Ukukopisha iiPaintings zeMasters kunye nabanye abaDumi
Inkcazo kunye neMimiselo yesenzo esifanayo